Zvinonyadzisira Hazvikuvadzi Here? Zvinonyadzisira Zvinokuvadza Here?
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Bicol Bulgarian Catalan Cebuano ChiSutu (Lesotho) Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Croatian Czech Dangme Danish Dutch Efik Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Greenlandic Guarani Haitian Creole Hiligaynon Hungarian Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kazakh Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Kwangali Lingala Lithuanian Luo Malagasy Mutauro Wemasaini wechiQuebec Mutauro Wemasaini wokuArgentina Mutauro Wemasaini wokuBrazil Mutauro Wemasaini wokuColombia Mutauro Wemasaini wokuCuba Mutauro Wemasaini wokuItaly Mutauro Wemasaini wokuJapan Mutauro Wemasaini wokuMexico Mutauro Wemasaini wokuRussia Myanmar Ngabere Norwegian Nzema Papiamento (Curaçao) Polish Portuguese Quechua (Bolivia) Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swedish Tagalog Thai Tigrinya Tsonga Turkish Twi Ukrainian Uruund Vietnamese Wayuunaiki Xhosa Yoruba Zulu
Zvinonyadzisira zvakazara munyika mazuva ano. * Zvinogona kuwanikwa mune zvokushambadzira, mumafirimu, mumimhanzi, mumagazini, paterevhizheni, mumitambo yemavhidhiyo, munhare dzeserura dzinonzi masmartphone, panzvimbo dzepaIndaneti, uye mune zvokutumirana mifananidzo paIndaneti, nezvimwewo. Zvinoita sokuti zvinonyadzisira zvava kufarirwa nevakawanda mazuva ano. Munzvimbo dzakawanda vazhinji vava kuona zvinonyadzisira kupfuura kare.—Ona bhokisi rakanzi “Zviri Kuitika Panyaya Yezvinonyadzisira.”
Zvinonyadzisira zviri kuitawo zvichichinja. Muzvinadzidzo Gail Dines akanyora kuti: “Mazuva ano mifananidzo yezvinonyadzisira yaipa zvikuru zvokuti iya yaionekwa seyakaipisisa ndiyo yava kuonekwa seyokutandarisa.”
Unoona sei kuwanda kuri kuita zvinonyadzisira uye kufarirwa kwazviri kuitwa? Zvinonyadzisira zvinokuvadza here kana kuti zviri pakati nepakati? Jesu akati: “Muti wose wakanaka unobereka chibereko chakanaka, asi muti wose wakaora unobereka chibereko chisingabatsiri.” (Mateu 7:17) Zvinonyadzisira zvinobereka chibereko chakaita sei? Kuti tiwane mhinduro, ngatimboonai mibvunzo inotevera panyaya yezvinonyadzisira.
Zvinonyadzisira zvinokanganisa sei munhu?
ZVINOTAURWA NENYANZVI: Zvinonyadzisira zvinopinda muropa zvakanyanya zvokuti vatsvakurudzi nevarapi vanozvifananidza nedhiragi rinonzi crack cocaine.
Brian, * uyo akanga apindwa muropa nokuona zvinonyadzisira paIndaneti anoti: “Hapana chaigona kundimisa. Ndaiita semunhu abatwa nehope asingazivi zvaari kuita. Ndaitanga kudedera ndoguma ndava kutemwa nemusoro. Ndakamborwisa kuti ndirege asi ndakaita makore zvichiramba.”
Kakawanda vanhu vanoona zvinonyadzisira vanovanza tsika iyi. Vanozviita pachivande uye vanonyengera. Saka hazvishamisi kuti vakawanda vavo vanonzwa sevasina shamwari, vanozviona sevanhu pasina, vanozvidya mwoyo, vanoora mwoyo, uyewo vanogona kungotsamwa nyore nyore. Vamwe vacho vanogona kutonzwa vachida kuzviuraya. “Ndakaguma ndava zindoga uye ndapererwa,” anodaro Serge uyo aigara achitora zvinonyadzisira paIndaneti achiisa pafoni yake zuva roga roga. “Ndaizviona sendisingakoshi, ndichizvipa mhosva, ndisina shamwari uye ndichiita sendakasungwa. Ndainyara chaizvo uye ndaitya kutsvaga rubatsiro.”
Kunyange kungoona zvinonyadzisira kwenguva pfupi kana kuti kungokanda ziso pazviri kunogona kuita kuti zvizotiipira. Dr. Judith Reisman, uyo anotungamirira pakutsvakurudza nyaya dzokuona zvinonyadzisira akataura kudare reSenate rokuUnited States achiti: “Mifananidzo yezvinonyadzisira haisi nyore kubvisa mupfungwa uye inochinja mafungiro emunhu, zvichiita kuti ingoerekana yava kuyeukwa mupfungwa dzake zvokuti zvinomuomera kuikanganwa.” Susan uyo ane makore 19 uye aimbovhura nzvimbo dzinobudisa zvinonyadzisira paIndaneti anoti: “Mifananidzo yacho yakadzika midzi mupfungwa dzangu. Ndinongoerekana ndava kuifunga. Zvinoita sokuti handizombokwanisi kuibvisa zvachose mupfungwa.”
ZVINONYANYA KUKOSHA: Zvinonyadzisira zvinoita kuti vanozviona vave varanda uye zvinovapinza mumatambudziko.—2 Petro 2:19.
Zvinonyadzisira zvinokanganisa sei mhuri?
ZVINOTAURWA NENYANZVI: “Zvinonyadzisira zvinoparadza mhuri newanano.”—Bhuku rinonzi The Porn Trap, rakanyorwa naWendy uye Larry Maltz.
Zvinonyadzisira zvinoparadza mhuri newanano nokuti
Zvinoita kuti vari muwanano vasavimbana, vasawirirana, uye vasadanana.—Zvirevo 2:12-17.
Zvinoita kuti munhu ari muwanano ave neudyire, afinhikane nemumwe wake uye asagutsikane naye.—VaEfeso 5:28, 29.
Zvinoita kuti munhu afungidzire achiita zvepabonde uye ave nemakaro ekuda kupinda pabonde nenzira dzisina kunaka.—2 Petro 2:14.
Zvinopinza munhu ari muwanano pamuedzo wokumanikidza mumwe wake kuita zvebonde nenzira dzisina kukodzera.—VaEfeso 5:3, 4.
Zvinoita kuti munhu ari muwanano anyengere uye aite gumbo mumba gumbo panze.—Mateu 5:28
Bhaibheri rinoudza vari muwanano kuti varege “kunyengera” wavakaroorana naye. (Maraki 2:16) Kuita gumbo mumba gumbo panze kunotova unyengeri hunokanganisa wanano uye hunoita kuti vakaroorana vaparadzane kana kurambana. Izvi zvinozoita kuti vana vari muwanano idzodzo vatambure.
Zvinonyadzisira pachazvo zvinotokuvadza vana. Brian ambotaurwa anotsanangura kuti: “Pandaiva nemakore anenge 10, ndakangodhumana nemagazini ezvinonyadzisira ababa vangu pataitamba chihwande-hwande. Ndakatanga kutarisa magazini acho pachivande, ndisingatombozivi kuti nei ndaifarira kuona mifananidzo yacho. Izvi zvakaita kuti nditange tsika inokuvadza iyo yakazoramba kupera kusvika ndava munhu mukuru.” Tsvakurudzo dzinoratidza kuti zvinonyadzisira zvinogona kuita kuti vari kuyaruka vatange kuita zvepabonde vachiri vaduku uyewo kuti vaite zvebonde nevanhu vakawanda, vashungurudze vamwe panyaya dzebonde, uye kuti vakanganisike mupfungwa.
ZVINONYANYA KUKOSHA: Zvinonyadzisira zvinokonzera kupesana pane vanodanana uye zvinoguma zvaita kuti munhu arwadziwe uye atambure mumwoyo.—Zvirevo 6:27.
Bhaibheri rinoti chii panyaya yezvinonyadzisira?
SHOKO RAMWARI RINOTI: “Naizvozvo, urayai nhengo dzemiviri yenyu . . . kana tichitaura nezvoufeve, zvinhu zvisina kuchena, chido chokurara nomumwe munhu, kuchiva kunokuvadza, nokuchochora uko kunoreva kunamata zvidhori.”—VaKorose 3:5.
Chiripo ndechokuti Jehovha * Mwari anovenga zvinonyadzisira. Izvi hazvirevi kuti haatombodi kuti vanhu vaite zvebonde. Akatisika tiine chido chokuita zvepabonde, aine chinangwa chokuti vari muwanano vafadzane, vasada kushayana, uye kuti vanakidzwe nechishamiso chokuva nevana.—Jakobho 1:17.
Saka nei tingati Jehovha anovenga zvinhu zvinonyadzisira? Ona zvikonzero zvishoma zvinotevera.
Anoziva kuti zvinonyadzisira zvinokanganisa upenyu hwevanhu.—VaEfeso 4:17-19.
Anotida uye anoda kutidzivirira kuti tisakuvadzwa.—Isaya 48:17, 18.
Jehovha anoda kudzivirira mhuri newanano.—Mateu 19:4-6.
Anoda kuti tive netsika dzakachena uye kuti tiremekedze kodzero dzevamwe.—1 VaTesaronika 4:3-6.
Anoda kuti tiremekedze simba ratiinaro rokubereka vana uye kuti tirishandise zvine rukudzo.—VaHebheru 13:4.
Jehovha anoziva kuti zvinonyadzisira zvinoratidza maonero akaipa, eudyire aSatani panyaya dzebonde.—Genesisi 6:2; Judha 6, 7.
ZVINONYANYA KUKOSHA: Zvinonyadzisira zvinokanganisa ukama hwemunhu naMwari.—VaRoma 1:24.
Zvisinei, Jehovha anonzwira tsitsi zvikuru vaya vanoda kusununguka padambudziko rokuona zvinonyadzisira. Bhaibheri rinoti: “Jehovha ane ngoni nenyasha, anononoka kutsamwa uye azere nomutsa worudo. Nokuti iye anonyatsoziva maumbirwo atakaitwa, achiyeuka kuti tiri guruva.” (Pisarema 103:8, 14) Anokoka vanozvininipisa kuti vauye kwaari kuti ‘vanzwirwe ngoni uye vaitirwe mutsa usina kukodzera kuwanwa kuti vabatsirwe panguva yakakodzera.’—VaHebheru 4:16; ona bhokisi rakanzi “Kukurira Tsika Yokuona Zvinonyadzisira.”
Vakawanda vakabvuma kubatsirwa naMwari. Rubatsiro rwake rune simba here? Ona zvinotaurwa neBhaibheri nezvevamwe vakakunda tsika dzakaipa: “Makagezwa mukachena, . . . makatsveneswa, . . . makanzi makarurama muzita raShe wedu Jesu Kristu uye nomudzimu waMwari wedu.” (1 VaKorinde 6:11) Vanhu ava vanogona kutaura sezvakaitwa nemuapostora Pauro paakati: “Ndine simba rokuita zvinhu zvose nokuda kwaiye anondipa simba.”—VaFiripi 4:13.
Susan uyo akakunda dambudziko rokupindwa muropa nezvinonyadzisira anoti: “Jehovha ndiye chete anogona kukubatsira kubuda mudambudziko iri. Kana ukamukumbira kuti akubatsire uye kuti akutungamirire, unogona kuva neukama hwakanaka naye. Haazombokurasisi.”
Kukurira Tsika Yokuona Zvinonyadzisira
Unoziva mumwe munhu ari kurwisana netsika yokuona zvinonyadzisira here? Ona zvimwe zvakabatsira vamwe kuti vakunde dambudziko iri.
1. Nyengetera kuna Mwari.
“Danho rinonyanya kukosha rokuti ukunde tsika yokuona zvinonyadzisira nderokunyengetera kuna Jehovha uchikumbira kuti akubatsire.”—Franz.
Jehovha anogona kupa munhu mudzimu mutsvene, kuti ave nesimba rinoita ‘kuti ade uye aite zvinomufadza.’ (VaFiripi 2:13) Mudzimu mutsvene unogona kumubatsira kukunda ‘zvido zvakaipa nokuchiva,’ kana akabvuma kutungamirirwa nawo.—VaGaratiya 5:16, 24.
2. Batsirwa nevamwe.
“Kupindwa muropa nezvinonyadzisira kunonyadzisa uye unenge usingadi kuudza vamwe kuti ubatsirwe. Unenge uchifunga kuti unogona kukunda uri wega. Asi idzodzo inhema. Unogona kukunda chete kana uchibatsirwa. Saka ndakarega kuzvikudza, ndokuudza mudzimai wangu. Ndakakumbira shamwari yangu yandinovimba nayo kuti indibatsire. Ndicho chinhu chakanga chakandiomera kupfuura zvose, asi ndakawana rubatsiro rwandaida.”—Yoshi.
Kuudza mumwe munhu nezvazvo kunoda ushingi uye kuzvipira. Asi rinotova danho rinokosha rokuti ukunde kuona zvinonyadzisira uye rokuti utangezve kuwirirana nevaya vaunoda. Susan ambotaurwa anoti: “Pashure pacho, ndakanzwa ndazorodzwa zvikuru. Nguva idzodzo dzairwadza zvikuru, asi zvakazoita kuti ndive nerugare uye ndive nehana yakachena.”—Jakobho 5:16.
3. Ziva uye dzivisa zvinogona kuita kuti ude kuona zvinonyadzisira.
Mamiriro ezvinhu akaita sei uye mafungiro api anoita kuti ude kuona zvinonyadzisira? Kuenda paIndaneti here? Kuona TV usiku here? Kuverenga magazini here? Kuenda kumhenderekedzo yegungwa here? Kuva nenzara, kugumbuka, kugara uri woga, kana kuti kuneta here? “Ziva zvinoita kuti ukurirwe uye zvidzivise sezvaunoita denda rinouraya,” anodaro Sven. Jesu akati: “Zvino kana ziso rako rokurudyi iroro richiita kuti ugumburwe, ribvise urirasire kure newe.”—Mateu 5:29.
“Pandinova mumuedzo wokuramba ndakatarira mukadzi ndichimuchiva, ndinobva ndanyengetera kuna Jehovha ndozvimanikidza kutarisa kumwe,” anodaro Franz. Musoro wemhuri anotaurwa muBhaibheri Jobho anoti: “Ndakaita mhiko yakasimba yokuti ndisambofa ndakatarisa musikana ndichimuchiva.”—Jobho 31:1, Today’s English Version.
4. Simbisa ukama hwako naMwari.
Franz anowedzera kuti: “Gara uchifunga zvinhu zvakanaka, uye iva nezvakawanda zvokuita pakunamata.”
Bhaibheri rinoti: “Zvinhu zvose zvechokwadi, zvinhu zvose zvokuva nehanya nazvo, zvinhu zvose zvakarurama, zvinhu zvose zvakachena, zvinhu zvose zvinodiwa, zvinhu zvose zvinotaurwa zvakanaka nezvazvo, kunaka kwose kungavapo, zvinhu zvose zvinorumbidzwa zvingavapo, rambai muchifunga zvinhu izvi . . . , uye Mwari worugare achava nemi.”—VaFiripi 4:8, 9.
^ ndima 3 Shoko rokuti “zvinonyadzisira” rinoreva zvinhu zvinobudisa nyaya dzepabonde zvakagadzirirwa kumutsa chido chokupinda pabonde kune anozviona, anozviverenga kana kuti kuzviteerera. Zvinogona kusanganisira mifananidzo, mashoko akanyorwa kana kuti zvinhu zvakarekodhwa.
^ ndima 25 Jehovha ndiro zita raMwari rinotaurwa muBhaibheri.
ZVIRI KUITIKA PANYAYA YEZVINONYADZISIRA
PASEKONDI YEGA YEGA: Vanhu vanenge 30 000 vanovhura nzvimbo dzepaIndaneti dzinobudisa zvinonyadzisira.
PAMINITI YEGA YEGA: Vanhu vanoshandisa Indaneti vanotumira matsamba anopfuura 1 700 000 anenge aine zvinonyadzisira.
PAAWA YEGA YEGA: MuUnited States munobudiswa mavhidhiyo anenge MAVIRI ezvinonyadzisira zvakaipisisa.
ZUVA REGA REGA: Mafirimu anopfuura 2 000 000 ezvinonyadzisira anorendeswa muUnited States chete.
MWEDZI WEGA WEGA: Vakomana 9 pa10 vega vega uye vasikana 3 pa10 vega vega vanoona zvinonyadzisira muUnited States.
GORE REGA REGA: Bhizimisi rokubudisa zvinonyadzisira rinowana mari inenge MABHIRIYONI ZANA emadhora ekuAmerica.